Nesorin'i Sipra ny pasipaoron'ny mpampiasa vola Golden Visa 45
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Chypre » Nesorin'i Sipra ny pasipaoron'ny mpampiasa vola Golden Visa 45
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao Mafana Chypre • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nesorin'i Sipra ny pasipaoron'ny mpampiasa vola Golden Visa 45.
Ny Komisiona eropeana dia nitsikera an'i Sipra tamin'ny nanomezany ireo pasipaoro ireo, tamin'ny filazany fa "tsy amidy ny soatoavina eropeana" ary miampanga ny tetik'asa "varotra ny zom-pirenena eropeana hahazoana tombony ara-bola."
Nanapa-kevitra ny hanala ny zom-pirenenan'i Sipra ho an'ny mpampiasa vola 39 sy mpikambana 6 ao amin'ny fianakaviany i Sipra.
I Sipra koa dia manadihady tranga enina hafa, ary nametraka 47 hafa eo ambany fanaraha-maso mitohy.
Nanaiky i Sipra tamin'ny Oktobra tamin'ny taon-dasa mba hampitsahatra ny drafitra Golden Visa ny 1 Novambra 2020.
Nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta Sipra androany fa hotadidiny amin'ny fomba ofisialy ny pasipaoro ho an'ny zom-pirenena 'Gold Visa' avy amin'ny vahiny 39 izay nahazo ny zom-pirenena cypriot tao anatin'ny tetika fampiasam-bola mahamenatra. Enina amin'ireo mpiantehitra aminy koa no hesorin'izy ireo ny pasipaorony Sipra.
Sipra Ny filankevitry ny minisitra dia nanambara ny fanapaha-kevitra hanala ny “zom-pirenena cypriot ho an'ireo mpampiasa vola 39 sy mpikambana 6 ao amin'ny fianakavian'izy ireo,” nefa tsy nanondro ny anaran'ireo olona voakasik'izany akory.
Nilaza ihany koa ny governemanta fa manadihady tranga enina fanampiny, ary nametraka 47 hafa “eo ambany fanaraha-maso tsy tapaka… mifototra amin'ireo fomba fanao omena.”
Nanaiky i Sipra tamin'ny Oktobra tamin'ny taon-dasa mba hamaranana izany Tetikasa Golden Visae tamin'ny 1 Novambra 2020, izay namela ny vahiny hiantoka ny zon'ny olona honina sy hizaka ny zom-pirenena ho valin'ny fampiasam-bola an-tapitrisany amin'ny firenena. Mba hahafeno fepetra, olona iray, fara faharatsiny, mila mampiasa vola 2 tapitrisa ($ 2.43 tapitrisa) amin'ny fananana any Sipra noho ny fanomezana ho an'ny kitapom-pikarohana ataon'ny governemanta.
Ny tetika, nantsoina hoe vola-ho-zom-pirenena, dia heverina fa nanangona € 7 miliara (8.12 lavitrisa $) talohan'ny naneken'ny governemanta fa nisokatra tamin'ny “fanararaotana mahery setra” izy.
Olona manodidina ny 7,000 no heverina fa nahazo zom-pirenena tamin'ny volavolan-dalàna talohan'ny nanakatonana azy, ka ny vaomiera notendren'ny governemanta no nahita fa mihoatra ny 53% amin'ireo nahazo pasipaoro tamin'ny alàlan'io fomba io no nanao izany tsy ara-dalàna.
Raha vantany vao nahazo pasipaoro Cypriot ny olona iray dia afaka nandeha nitety tany sy niasa ary nipetraka tany amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana hafa. Talohan'izay dia nitsikera ny vaomiera eropeana Sipra tamin'ny fanomezana ireo pasipaoro ireo, tamin'ny filazany fa "ny soatoavina eropeana dia tsy amidy," ary miampanga ny tetika hoe "varotra ny zom-pirenena eropeana hahazoana tombony ara-bola."